छ श्रीमती विवाह गरेपछि घट्यो यस्तो घट्ना ! « Pariwartan Khabar
छ श्रीमती विवाह गरेपछि घट्यो यस्तो घट्ना !
21 November, 2019 4:05 pm
अफ्रिकाको नाइजेरियामा विचित्र घटना भएको छ । पाँच जना श्रीमतीहरुले जबरजस्ती यौन सम्पर्क गर्न लगाएर श्रीमानको निधन भएको छ ।
नाइजेरियाको बिनेयू युरो एक करोडपति व्यापारी थिए । उनले ६ श्रीमती विवाह गरेका थिए । उनले ६ वटा विवाह गरेपछि सबै श्रीमतीलाई समान समय दिन नसकेपछि श्रीमतीहरु रुष्ट थिए । युरोको यस्तो व्यवहार बाँकी पाँच जना श्रीमतीलाई मन परेको थिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार युरो आफ्नी छैटौं श्रीमतीसँग यौन सम्बन्ध राखिरहेका थिए । त्यति बेला अन्य पाँच जना श्रीमती उनको कोठामा पुगे। पाँच जना श्रीमतीले आफूलाई पनि पालैपाले यौन सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
श्रीमतीहरुको दबावमा उनले पालैपाले यौन सम्पर्क गर्न थाले । चार श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क गरेपछि पाँचौं श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्दा राख्दै उनको निधन भयो। श्रीमानको निधनपछि पाँचै जना श्रीमती फरार भए। प्रहरीले युरोका दुई श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको छ भने अन्य चार जना अहिले पनि फरार छन्। एजेन्सी…
२२ बर्षकी यी युवती आफ्नो खुट्टाको फोटो बेचेर महिनामा कमाउँछिन् साढे १२ लाख